DAGAAL SADDEXAAD DUNIDA MA KA QARXI DOONA? : Salaan Media
DAGAAL SADDEXAAD DUNIDA MA KA QARXI DOONA?
cabdikhaaliq diiriye | April 14, 2018
Dagaallada ka taagan dalka Suuriya ayaa horseeday in quwado waawayn ay faraha lasoo galaan xaaladda dalkaasi.
Warbaahinta dunida ayaa baryahan hadal haysa xiisadda soo kala dhexgashay dalalka Suuriya, Maraykanka, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Dalalka gorodda iskula jira ayaa waxay yihiin Ruushka iyo Maraykanka oo taageera ka helaya dalal kale oo reer galbeed ah.
Madaxweyne Trump ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in tallaabo ay ku dhaqaaqi doonaan oo looga jawaabayo weerarka dhawaan lagu qaaday magaalada Duuma ee dalka Suuriya halka Xukuumadda Ruushka ay uga digtay Maraykanka inuu tallaabo millitari qaado, haddii kale ay soo ridi doonaan gantaaladooda, islamarkaasna ay duqeyn doonaan halkii laga soo riday.
Dowladda Suuriya waxay sheegtay in la duuqeeyay mid ka mid ah saldhigyadeeda cirka ee ku yaallo dalka Suuriya.
Dagaal saddexaad miyuu dhici kara?
Khuburrada caalamiga ah ee arrimmaha dublumaasiyadda ayaa ku kala aragti duwan in dagaal saddexaad uu jiri karo.
Qaarkood ayaa waxay leeyihiin in suurtogal tahay inuu dunida ka aloosmo dagaal saddexaad , halka kuwo kalena ay qabaan inaan la joogin xilligii dunidan ay wajahi lahayd dagaal wayn.
Steven Tsang agaasimmaha mac-hadka China ayaa waxaa uu qabaa in Kuuriyada Waqooyi ay ku dhawdahay xilligi ay gaari lahayd awoodda hellitaanka quwadda nukliyeerka.
Waxaa la joogaa hadda xilli ay jiraan quwaddo aad u waawayn oo hardamaya dhexdooda, sidaasi waxaa yiri Shashank Joshi oo ah khabiir Koonfurta Aasiya iyo Bariga Dhexe.
Sergey Markov oo ka tirsan mac-hadka siyaasadda ee Moscow ayaa waxaa uu sheegay in hoggaamiyeyaasha reer galbeedka ay ruumaysan yihiin inay ka awood badan yihiin Ruushka.
Lina Khatib oo iyadana ku takhasustay arrimmaha bariga dhexe ayaa waxay sheegtay in dagaallo badan oo jiro ay lugaha kula jiraan dalal caalami ah islamarkaaana xasraddani ay tahay mid la isku xulufaysanayo.
Muxuu ka billawday dagaalka?
Dowladda Suuriyaa ayaa lagu eedeeyay inay hubka kiimikada ku duuqaysay magalaada Duuma ee dalka Suuriya taaso la sheegay in boqolaal qof oo ay carruur iyo haween u badan yihiin ay saameysay.
Warbixin ay soo xigatay ha’yadda caafimaadka dunida ee WHO ayaa lagu sheegay in 500 qof ay saamaysay kiimikada.
Dunida ayaa si weyn u cambaareysay falkan balse Suuriya way beenisay eedeymaha duqaynta magaalada Duuma.
Maxaa u dambeeyay?
Xoghayaha arrimmaha dibbada ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa waxaa uu sheegay in caddayn aanu loo haynin in hubka kimikada lagu weeraray magaalada Duuma.
Dhanka kale, Safiirka Maraykanka ee Qaramada Midoobay, Nikki Haley, ayaa sheegtay in dhiigga carruurta Suuriya uu mas’uuliyadda u ridanayo Ruushka.
Madaxweyanaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxaa uu sheegay inay duqaymo la beegsan doonaan goobaha hubka kiimikada ee dowladda Suuriya.
Waxaa uu intaasi ku daray inay caddaymo u hayaan in Xukuumadda Bashar Al Asad ay hubka mamnuuca ah ay u adeegsatay dad rayid ah goobaha mucaaradka ay ku xooggan yihiin.
Xukuummadda Britain ayaa sheegtay inay tallaabo qaadi doonto oo ka dhan ah weerarka hubka kimikada ee Suuriya.
« Madaxtooyada Somaliya Oo Ka Hadashey Safarka Uu Maanta Madaxweyne Farmaajo Ugu Baxay Sucuudiga +[ Muuqaal ]
Daawo Muqaal:Shacabka Hargaysa Oo Ka Aragti Dhiibtay Waxqabadka Xukuumada 120-ka Cisho..April 14.18 »